Ny tsiambaratelonay amin'ny Search Engine Optimization | Martech Zone
Alarobia, Jolay 28, 2010 Asabotsy, Septambra 19, 2015 Douglas Karr
Ity misy ohatra mahazatra momba ny statistikan'ny laharam-pahamehana ho an'ny iray amin'ireo mpanjifanay:
Ny tsipika tsirairay dia maneho teny lakile, ary ny Y-Axis no laharan'izy ireo araka izay noraketin'i Laboratoara manampahefana. Latsaky ny 2 volana, ary efa ho azontsika eo amin'ny pejy 1. Ato anatin'ny 6 volana, tena hanana laharana lehibe ho azy ireo isika. Miaraka amin'ny mpanjifa 20 mahery, fantatray tanteraka ny zavatra takiny mba hahazoana toerana iray milahatra tsara. Ny iray amin'ireo mpanjifanay lehibe ankehitriny dia laharana faha-1 ho an'ny 3 amin'ny teny avo indrindra amin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny orinasan'izy ireo, ary koa fehezan-teny hafa vitsivitsy izay ananan'izy ireo eo amin'ny pejy 1 ary manatsara.
Ny SEO eo an-toerana dia tsy zava-miafina. Ity no ataontsika:
Alaivo antoka Analytics dia napetraka araka ny tokony ho izy ary mahazo antontan'isa tsara momba ny sori-dalana izay iasantsika. Izahay manamarina ireo teny lakile izay mitondra fifamoivoizana dia tena mifandraika amin'ny orinasa tianay hatao eo amin'ilay tranonkala. Izahay koa manandrana mampiditra ny fandrefesana fandrefesana… indraindray ny fifamoivoizana azonao dia tsy voatery hitondra vola mankany amin'ny orinasanao. Zava-dehibe ny manavaka azy roa.
Mampiasà fikarohana fikarohana Adwords, Semrush ary SpyFu hahazoana fahalalana momba ny teny lakile izay nalahatray amin'izao fotoana izao, inona no tsy nalahatray ary inona no laharam-pifaninanana. Izany dia hanome fe-potoana hahafahantsika mikendry. Izahay dia mikendry ireo teny izay efa ananantsika laharana izay fantatray fa afaka manosika any amin'ny laharana avo kokoa… antenaina ny laharana # 1.
Hamarino tsara fa an'ity tranonkala ity ambaratongam-pitantanana dia mifanaraka amin'ny tetika sy ny teny fanalahidy marina tadiavintsika hahazoana azy. (ohatra: ny sokajy vokatra tiana amboarina tsara dia ampifandraisina amin'ny alàlan'ny fitetezana tranokala na voafantina amin'ny rohy tsara ao anaty atin'ny pejy fandraisana). Taorian'ny fanovana ny algorithm farany nataon'i Google dia nanosika ny mpanjifantsika izahay 'hanidina' any amin'ireo tranonkala ka malalaka kokoa izy ireo fa tsy lalina. Midika izany fa pejy faharoa kokoa, fa mitazona ny pejy fahatelo ary mihoatra ny kely indrindra.
Hamarino tsara fa manana ny tranokala robot rakitra, Sitemaps, ary voasoratra anarana miaraka amin'ny Webmaster avy amin'ny milina fikarohana lehibe tsirairay mba hahafahantsika manara-maso ny fomba fahitan'ny motera fikarohana sy ny fanondroana ny atiny, ary koa ny fanondroana ny olana.
Hamarino tsara fa manana pejy ilay tranonkala na manana lahatsoratra miresaka mivantana amin'ny teny fanalahidy na teny mitovy dika mitovy aminao (raha manao fikarohana amin'ny teny lakile ianao dia jereo eo ambanin'ny pejy valin'ny motera fikarohana raha te hahita ireo teny mitovy hevitra). Midika izany fa mampiasa ny teny lakile amin'ny fiandohan'ny lohatenin'ny pejy, amin'ny fiantombohan'ny famaritana meta, amin'ny lohateny, amin'ny fiandohan'ny atiny, ary ao anatin'ny atin'ny pejy (ao anatin'ny mari-pamantarana matanjaka na sahy).
Manana mpanjifa tsara ny mpanjifa sasany fahefana (midika hoe nomarihin'i Google ambony izy ireo miorina amin'ny tantaran'ny sehatr'izy ireo raha oharina amin'ireo teny fikarohana nifaninan'izy ireo). Ny hafa tsy manana fahefana ka mila mitondra paikady mampitombo ny fahefany isika. Izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fiantohana fa mifamatotra amin'izy ireo avy amin'ny sehatra manan-danja hafa izay mitana toerana tsara ho an'ny teny lakile manokana na fizarana indostrialy. Mila asa iray taonina ity.
Farany… ataonay antoka fa manohy mahazo izy ireo fiovam-pony. Indraindray izany dia mitaky teknika fanatsarana, famolavolana antso-to-hetsika, ary fanaingoana ireo pejy fitodiana. Na izany aza, fantatray fa ny laharana sy ny fivezivezena dia tsy misy dikany raha tsy tena mitondra fiara dolara mankany amin'ny farany ambany ny orinasa.
Ny fanenjehana am-pahavitrihana bilaogy vahiny, famoahana fanambarana an-gazety, fanehoan-kevitra mavitrika na fandraisana anjara amin'ireo tranonkala sosialy mifandraika amin'ny teny lakile dia ilaina. Eto no misy fikarohana sy haino aman-jery sosialy manomboka mifanindry. Nanjary fanalahidy ny fampiroboroboana ny atiny… tsy ho an'ny fitaterana fifamoivoizana ihany fa ho an'ny fitaterana rohy hiverina amin'ny tranokalanao ihany koa.
Mazava ho azy, tsotra daholo izany rehetra izany… saingy tsia. Manana fitaovana mety, mahatakatra ny fomba fampiharana Analytics ary manara-maso ny tahan'ny fiovam-po, ary afaka mamorona ny angon-drakitra rehetra - Analytics, webmaster, filaharana, teny fanalahidy, sns. Manome vola anay ny mpanjifanay hanao an'izany… ary ampianarinay azy ireo ihany koa amin'ny fomba fiasa.
Ny bandy anaty sasany ary na ny consultant SEO aza dia miady hevitra momba ny paikadinay… saingy sarotra ny miady hevitra rehefa # 1 ianao. 🙂
Tags: fikarohana OptimizationSEOseo miafina